Khariirada gobolka Alabama
Alabama Waa gobol kamida gobolda Maraykanka.waxa uu kuyaalaa dhanka koonfureed.dhanka waqooyi waxa kaxiga gobolka Tinisii.dhanka barigana waxa kaxiga Gobolka Joorjiya. dhanka koonfurna waxa kaxiga gobolka Florida iyo Gacanka Maksiko.galbeedna waxa kaga toosan gobolka Mississippi. gobolka alabama waa gobolka 30naad ee gobolda Maraykanka marka laeego badka ama masaafada.dadka kunool waxa lagu qiyaasaa ilaa 4.5 milyan oo qof.gobolka Alabama waa gobolda maraykanka ugu dhaqaalha liita waayo waxa uu dhaqaalihiisu ku xidhanyahay beerha kaliya oo malaha wax soosaar lasheego oo dhinaca warshadaha ah. dadka kunooli waa dad reermiyi iyo beeralay u badan waxaanay u badanyihiin dadka cadaanka ah. gobolka Alabama waxa uu leeyahay magac kale oo Naanaysah waana magaca Yellowhammer
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Alabama.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Alabama&oldid=206676"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Oktoobar 2020, marka ee eheed 15:29.